Site Engineer | Myint Myat Kyaw Group of Company Limited. ﻿
•	အသက် (၃၀) နှင့် အထက်ဖြစ်ပြီး Contractor များ၏ အရည်အသွေးပေါ်တွင် စီစစ်ကြီးကြပ်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
•	Estimated တွက်ချက်နိုင်သူ၊ လုပ်ငန်း Schedule အတိုင်း အောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်နိူင်သူဖြစ်ရမည်။
•	BE,B.Tech,A.G.T.I (Civil) ဘွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။
•	ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိ ဆိုဒ်များသို့ သွားလာနိူင်သူဖြစ်ရမည်။
Site Engineer Engineering & Technical Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss JobsInYangon Myint Myat Kyaw Group of Company Limited. Engineering & Technical jobs Engineering & Technical jobs Trading Jobs in Myanmar, jobs in Yangon